DigiByte စျေး - အွန်လိုင်း DGB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DigiByte (DGB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DigiByte (DGB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DigiByte ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $81 466 821.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DigiByte တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DigiByte များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DigiByteDGB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.08DigiByteDGB သို့ ယူရိုEUR€0.0668DigiByteDGB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0578DigiByteDGB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0736DigiByteDGB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.67DigiByteDGB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.496DigiByteDGB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.73DigiByteDGB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.303DigiByteDGB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.1DigiByteDGB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.103DigiByteDGB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.59DigiByteDGB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.622DigiByteDGB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.448DigiByteDGB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.96DigiByteDGB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.12.27DigiByteDGB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.107DigiByteDGB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.112DigiByteDGB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.5DigiByteDGB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.522DigiByteDGB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥8.7DigiByteDGB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩89.33DigiByteDGB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦32.87DigiByteDGB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6.05DigiByteDGB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.24
DigiByteDGB သို့ BitcoinBTC0.000001 DigiByteDGB သို့ EthereumETH0.00004 DigiByteDGB သို့ LitecoinLTC0.000359 DigiByteDGB သို့ DigitalCashDASH0.000309 DigiByteDGB သို့ MoneroXMR0.000303 DigiByteDGB သို့ NxtNXT1.31 DigiByteDGB သို့ Ethereum ClassicETC0.00415 DigiByteDGB သို့ DogecoinDOGE1.33 DigiByteDGB သို့ ZCashZEC0.000462 DigiByteDGB သို့ BitsharesBTS0.696
DigiByteDGB သို့ RippleXRP0.0854 DigiByteDGB သို့ BitcoinDarkBTCD264582.83 DigiByteDGB သို့ PeerCoinPPC0.0819 DigiByteDGB သို့ CraigsCoinCRAIG3498105263.16 DigiByteDGB သို့ BitstakeXBS0.0322 DigiByteDGB သို့ PayCoinXPY32 DigiByteDGB သို့ ProsperCoinPRC8000000 DigiByteDGB သို့ YbCoinYBC0.00004 DigiByteDGB သို့ DarkKushDANK2461629629.63 DigiByteDGB သို့ GiveCoinGIVE16616000000 DigiByteDGB သို့ KoboCoinKOBO6.16 DigiByteDGB သို့ DarkTokenDT0.0737 DigiByteDGB သို့ CETUS CoinCETI1107733333.33